Wangibhebha umzala wami impene ayisapheli – Izindaba Zokubhebhana
Wangibhebha umzala wami impene ayisapheli
Sihlala samantombazane sonke no gogo. Kunokuvakasha umzala, ungangami uwumfana. Manje njalo masekulalwa uhlezi efuna ukulala eduze kwami, sibhebhane ebusuku, manje sisebancane sila ko 10 yrs sobabili, ay ngiqale ngiyijwayele lento, Uma engekho ngigcine sengizikopa. Ngikhule nalempene iyakhula nayo. Wawumnandi lowam’thondo kamzala emncane engakho.
Manje sengikhilile ngibhebha kwasani ebhayizayo, sengabhebhisa ngisho Ubaba wengane ka sisi wami benobhuti wakhe same day. Amadoda ami ayangibhebha kodwa impene ayipheli, kwake kwafika amadoda ami amabili endlini la ngiqashwe khona engazani saphuza sabhema insangu sabhebhana sonke, omunye walifaka ngemuva, omunye ngaphambili.
Yey limnandi ipip’, manje eflatini engihlala kulo sengabhebhisa ngisho unogada, kodwa manje indoda yami iyaluthanda ucansi. Mina akuvumi nje ngibhejwe ipip’ elilodwa ngyashesha ukubhoreka, lempene iyangihlupha ngisho ngisemsebenzini ngiya etoilet ngiyozodlokodla.
Umbhali : ozifihlileyo
Post Navigation ← Eziqhanyelisayo 2Ngamubhebha umamncane umfazi kababa omncane →